सुनौली नाका : भारतबाट आएकाहरुको न ज्वरो नापिन्छ, न त सबैको रेकर्ड राखिन्छ | Ratopati
personतेजेन्द्र के.सी. exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख २, २०७८ chat_bubble_outline0
दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरु भारतबाट आउने गरे पनि उनीहरुले न सबैको रेकर्ड राख्न सकेका छन्, न ज्वरो नै नाप्छन् ।
ललितपुरमा ‘डबल म्युटेन्ट भेरियन्ट’ भेटियो, संक्रमित सम्पर्कविहीन
​तर स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख डा.राजेन्द्र गिरीले कम्तिमा एक हप्ता भारतमा बसेर फर्किएकाहरुको रेकर्ड राख्ने र उनीहरुको ज्वरो नाप्ने गरिएको बताए । उनले भने, ‘यदि लामोसमय भारत बसेको रहेछ र ज्वरोसमेत देखियो भने त्यस्ता मानिसको एन्टिजेन परीक्षण गरिन्छ ।’ यस्तो परीक्षणबाट अहिलेसम्म एक जना कोरोना संक्रमित फेला परेको उनले बताए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी अधिकारीले पछिल्लो हप्ता भारतबाट फर्किने नेपालीको संख्या वृद्धि भएको बताए । तीन हप्ता अगाडिसम्म दैनिक २ सय नेपाली नागरिक यो नाकाबाट भित्रिने गरे पनि अहिले दैनिक ५ सयसम्म फर्किन थालेको उनको भनाइ छ ।
नाकामा भारतबाट आउनेको भिड बढे पनि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रवन्ध भने निकै फितलो छ । भारतबाट आउनेहरुले पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएको पाइँदैन ।
पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमण निकै बढेपछि त्यहाँ रोजगारीका सिलसिलामा रहेका नेपालीहरु धमाधम स्वदेश फर्कन थालेका छन् । यसरी फर्कनेमध्येका एक हुन् अर्घाखाँचीको मालारानी घर भएका उमेश खनाल । कानपुरको होटलमा कुकको काम गर्ने उनी भारतमा कोरोना संक्रमण वृद्धि हुन थालेपछि घर फर्किएको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘त्यहाँ पनि कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो, मालिकले होटल बन्द गर्ने सोच बनायो । म पनि नयाँ वर्ष मनाउन भनेर घरतिर आएको छु, हेरौं के हुन्छ !’
रुपन्देहीका केही विद्यालयमा कोरोना संक्रमित पाइएपछि ती विद्यालय बन्द गर्नु परेको स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले रातोपाटीलाई बताए ।
बुटवलको कालिका मावि र भैरहवाको निमा प्रतिभा कलेज कोरोना कारण बन्द भएका छन् । कालिका माविका ९ जना शिक्षकमा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ । निमा प्रतिभा कलेजमा ३ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि कलेज बन्द गर्नु परेको डा. गिरीले बताए ।
रूपन्देहीमा फेरि प्रत्येक दिन दुई दर्जनभन्दा बढी संक्रमित बिरामी थपिएर अस्पतालमै भर्ना हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. राजेन्द्र खनालले संक्रमितहरु अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम बढेको बताए । उनले पछिल्लो समय कोरोनाको ग्राफ वृद्धि भएको बताए ।
सोमबारमात्रै बुटवलको कोरोना अस्पतालमा तीन जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । उनले अहिले भारतबाट आएकाभन्दा पनि स्थानीयहरुमै संक्रमण पाइएको बताए ।
रुपन्देही प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले सीमा नाकामा स्वास्थ्य मापदण्ड व्यवस्थित गर्ने बताए । हाल डेस्क राखेर नाकामा ज्वरो र शंका लागेका बिरामीको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने काम भईरहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतबाट पाठ सिकेर सीमा क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न लागिएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा थप २७४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
रौतहटमा थप दुई संक्रमितको मृत्यु
उपचार नपाएर एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
मेयरले आफू चढ्दै आएको गाडीलाई बनाए एम्बुलेन्स